भौगोलिक समय के हो र यसलाई कसरी मापन गरिन्छ? नेटवर्क मौसम विज्ञान
धेरै अवसरहरूमा तपाईंले मेरो पोष्टहरूमा अभिव्यक्ति पढ्नु भएको हुन सक्छ "भौगोलिक समय"। हामीले काम गर्ने स्केल पृथ्वी र ब्रह्माण्डको भूगोल र विकासको बारेमा कुरा गर्न सक्दैन। दिमागमा राख्नुहोस् कि मानव मापन जसमा हामी सामान्यतया कार्य गर्दछौं प्रति व्यक्ति करीव १०० वर्ष। जबकि, समयको अर्थ भौगोलिक प्रक्रियाहरूमा केहि पनि छैन। त्यहाँ हामीले भौगोलिक समयको बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ।
पृथ्वीको अध्ययनको ठूलो स्तर हुनु आवश्यक छ जसमा यसले सबै भौगोलिक प्रक्रियाहरूलाई समाहित गर्न सक्दछ किनकि ती वास्तविकतामा भएका छन्। त्यसकारण आज हामी भूगर्भीय समयको बारेमा कुरा गर्ने छौं। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि भूगर्भविज्ञानीहरू कसरी हाम्रो ग्रहमा भौगोलिक घटनाहरूको मिति र मिति दिन्छन्?
1 भौगोलिक समय को परिभाषा
2 स्केल र भूवैज्ञानिक घटनाहरू
3 भूवैज्ञानिक प्रभाग
भौगोलिक समय को परिभाषा
सबै भौगोलिक जानकारी संकुचित गर्न हामी यो भूवैज्ञानिक समय प्रयोग गर्छौं। उदाहरणको लागि, तलछट बनाउने चट्टानहरूको गठनको बारेमा जब हामी बोल्छौं, हामी दबाबको शक्तिले सामग्रीहरूको कम्प्यारेसनको कुरा गर्छौं। यो प्रशिक्षण दिन, हप्ता, वा महिनाहरूमा हुँदैन। यो अधिक छ, यो १०० बर्षमा हुँदैन। बलौटे ढुstone्गा जस्तो तलछटको चट्टानको गठनको प्रक्रिया हजारौं बर्ष लाग्छ। पृथ्वीको भूगर्भीय इतिहासमा मानव सानो पलक पनि छैनन्।
सबै भूवैज्ञानिक प्रक्रियाहरू जुन हामीले काम गर्न सक्दछौं पैमानेमा परिचय गर्न, हामी Aeons, Geological Ages, अवधि र युगहरू प्रयोग गर्दछौं। हामीसँग काम गर्न प्रयोग गरिने सामान्य समयको विपरीत, भूगर्भीय समयको निश्चित अवधि हुँदैन। किनभने पृथ्वीको ईतिहासमा त्यहाँ विस्तारहरू छन् जहाँ अधिक महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटे। यी घटनाहरू l मा संक्षिप्त गरिएको छहिमाली गठन, क्षरण, जन लोप, आदि
यी सबै सुविधाहरू र दिशानिर्देशहरूको साथ, हामी भूगर्भीय समयको परिभाषा गर्न सक्छौं जुन समयको समयावधि हो जुन पृथ्वीको गठन र विकास (आजभन्दा 4,5. billion अरब वर्ष पहिले) अहिलेसम्म फैलिएको छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो पृथ्वीको क्यालेन्डर नै हो।
स्केल र भूवैज्ञानिक घटनाहरू
यो समय मापन भूगर्भविज्ञहरु र अन्य वैज्ञानिकहरु द्वारा व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ। उनलाई धन्यवाद, तिनीहरू पृथ्वीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको लागि समय र मितिहरू दिन सक्दछन्। चट्टानहरूको भित्र जहाँ तपाईं यी 4,5. billion अरब वर्षहरूमा हाम्रो ग्रहमा के भयो भनेर अधिक जानकारी पाउनुहुनेछ।
१ XNUMX औं शताब्दी सम्म, पृथ्वी केवल केहि हजार बर्ष पुरानो हो भनेर मानिन्थ्यो। साँचो स्थलीय ज्ञान २० औं शताब्दीमा मेरी क्युरीले रेडियोधर्मिताको आविष्कारको साथ आयो। यसको लागि धन्यवाद पृथ्वीको क्रस्टको खण्डहरू र झर्ने उल्का पिण्डहरू डेट गर्न सम्भव भएको छ।
यदि हामी भौगोलिक समयको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं भने हामी दशक वा शताब्दी जस्ता समयका एकाईहरू प्रयोग गर्न सक्दैनौं। सब भन्दा उपयोगी तरीका भनेको प्रमुख भूगर्भीय घटनाहरू द्वारा समय विभाजन गर्नु हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो हाम्रो ग्रहको उत्पत्तिदेखि नै चट्टानहरू र जीवित प्राणीहरूले भोगेका ठूलो परिवर्तनहरूको बारेमा हो।
भौगोलिक समयमा, समयको सबैभन्दा ठूलो एकाई प्रयोग गरियो। यो ईन युग, काल, युग र चरणहरूमा विभाजित छ। पृथ्वीको सम्पूर्ण इतिहास दुई महान समयका दुई भागमा बाँडिएको छ। पहिलो प्रेसम्ब्रियन हो, जहाँ पृथ्वीले करिब 4,5. years अरब वर्ष पहिले गठन गरेको थियो। यो लगभग 570० मिलियन वर्ष पहिले समाप्त भयो। हामी अब फानेरोजोइक ऐनमा छौं। यी दुई eons धेरै ठूलो छ, त्यसैले हामीलाई सानो timecles आवश्यक छ।
हामी भूगर्भीय समय मापनको प्रत्येक एकाईलाई गहिराईमा अध्ययन गर्ने छौं।
यो समय मा सबै भन्दा ठूलो हो। यो प्रत्येक १ अरब बर्ष मापन गरिएको छ। प्रान्याम्ब्रियनबाट फानेरोजोइक जाने बाटो महाद्वीपको विखण्डनको कारण हो जुन Pannotia भनिन्छ। Phanerozoic को अर्थ "दृश्य जीवन" हो। यस युगको सुरु हुनुभन्दा अघि त्यहाँ जीवन पहिले नै थियो, तर यहीं तिनीहरू अधिक जटिल र विकसित भएका छन्।
युग सटीक एकाई छैन। यो एक साथ मिलेर महत्त्वपूर्ण भू-भौगोलिक वा जैविक परिवर्तनहरू ग्रहको गठन भएदेखि ग्रस्त छ। प्रत्येक युग एक महत्त्वपूर्ण घटनाको साथ शुरू हुन्छ। उदाहरणको लागि, मेसोोजिक पहिलो चरा र स्तनपायी प्राणीहरूको उपस्थितिको साथ सुरू हुन्छ।
भौगोलिक समय को उमेर हो: एजोइक, आर्कचिक, प्रोटेरोजोइक, पालेओजोइक (प्राचीन जीवन), मेसोजोइक (मध्यवर्ती जीवन), र सेनोजोइक (हालसालैको जीवन)। युग समयमै धेरै ठूलो भएकोले अधिक शुद्धताका लागि भागहरू कम गर्नु आवश्यक छ।
यो युगको सब डिभिजनको बारेमा छ। प्रत्येक अवधि एक भौगोलिक घटना या एक जीव को रूप मा चिह्न को रूप मा सेवा को रूप मा चिह्नित। उदाहरणको लागि, क्याम्ब्रियन अवधिमा पञ्जिया भनिने महामहाद्वीप फुट्छ।
युग कालखंडको भाग हो। प्रत्येक युगमा भूगर्भीय घटनाहरू सानो स्तरमा रेकर्ड गरिएका छन्। उदाहरण को लागी, पेलियोसीन मा छ युरोप र उत्तर अमेरिका को अलग। यद्यपि भौगोलिक समयको धेरै नक्शामा अन्तिम पटक लेखिएको होलोसिन हो, पृथ्वीले यसलाई पार गरिसकेको छ। हामी अब एन्थ्रोपोसीनमा छौं। यो मान्छेको कार्य द्वारा परिभाषित पहिलो युगको बारेमा हो।
यो निर्विवाद छ कि मानव जातिको पृथ्वीमा ठूलो परिणामहरू छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, औद्योगिक क्रान्तिदेखि आजसम्म, ग्रहको परिवर्तन कुल छ। मानव द्वारा सुधारित प्राकृतिक इकोसिस्टमहरू विरलै छन्। मानव ग्रह को ग्रह को लगभग सबै कुनामा मा प्रवेश गर्न र आकार गर्न मा सक्षम छ।
ग्लोबल मा ठूलो परिवर्तन जस्तै जलवायु परिवर्तन हाम्रो गतिविधिहरु बाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन को कारण हो। ओजोन तह जस्तै, जुन स्थिर रहेको छ, हामीले लगभग दशकहरूमा यसलाई तल झार्न प्रबन्ध गरेका छौं। हामी प्रायः .०० वर्षमा घटेको घाता .्क विकासको बारेमा कुरा गर्दैछौं। सन्‌ १ 300० मा संसारको जनसंख्या एक अरब बासिन्दाहरूसम्म पुगेको थिएन। तथापि, आज, हामी 7,5..XNUMX अर्ब भन्दा बढी छौं। यो आशा गरिएको छ कि २० 2050० सम्ममा हामी झण्डै १० अरब पुग्नेछौं।
तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ, भूगर्भीय तराजुहरू जीवाश्महरूको मिति लिन र हाम्रो ग्रहको उत्पत्ति राम्रोसँग बुझ्नको लागि धेरै आवश्यक छन्। र तपाइँ, के तपाईंलाई भूगर्भीय समयको बारेमा थाहा छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » भौगोलिक समय भनेको के हो र यसलाई कसरी मापन गरिन्छ?
फर्नान्डो ग्रान्डोस गुजमान भन्यो
ग्रह पृथ्वीको विभाजन सबै भन्दा पहिले र सबैको साथ छ!
FERNANDO GRANADOS GUZMAN लाई जवाफ दिनुहोस्
मार्टा रोड्रिग्ज भन्यो
मैले हालसालै टेलिभिजनमा एक टिप्पणी सुनेको थिएँ जसमा म थप अनुसन्धान गर्न चाहन्छु। मैले सुनें कि मस्तिष्क छालहरूको आवृत्ति र मानव समयको व्यक्तिपरक धारणा बीचको सम्बन्ध थियो जुन पृथ्वीको केही चालमा परिवर्तन भएको थियो, मलाई थाहा छैन कि यो "पोषण" थियो वा त्यो अन्य आन्दोलन जुन डन्डाहरूको दोलन हो, वा यदि यो हाम्रो ग्रहमा केहि "चुम्बकीय" थियो।
मैले स्पष्ट गर्न चाहेको प्रश्न यो हो कि हाम्रो ग्रहको शारीरिक, आन्दोलन वा चुम्बकीय घटनाको सम्बन्धसँग यो सम्बन्ध हुन सक्दछ जुन अब समय अझ छिट्टै बितेर जान्छ। अग्रिम धन्यवाद।
मार्टा रोड्रिग्जलाई जवाफ दिनुहोस्
पेड्रो सिबाजा भन्यो
पहिलो छवि जुन भौगोलिक समय विभाजन गर्दछ तपाईंसँग सम्बन्धित छ, यदि हो भने, कुन वर्ष यो कार्य प्रकाशित भयो?
पेड्रो सिबाजालाई जवाफ दिनुहोस्